चर्चित अभिनेत्री आम्रपालीले नेपाली रीति रिवाजमा बिहे गरेपछि फ्यानहरु चकित – Sandes Post
April 8, 2022 2812
उनीहरुको कुनै पनि गीत आउँदा सामाजिक सञ्जालमा हंगामा मच्चिन्छ । यो म्युजिक भिडियो हो कि फिल्म सुटिङको भिडियो त्यो हेर्न बाँकी छ ।जे भए पनि फ्यानका लागि उनीहरु केही धमाका ल्याउँदैछन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यी दुईले आगामी दिनमा के गर्छन भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ ।
Prevकिन बन्द भए ७२९ वटा सार्वजनिक विद्यालय ?
Nextकठै ! पललाई भेट्न गएका उनका मेनेजर यसरी धरधरी रु दै निस्किए,पलले पठाए यस्तो सन्देश (भिडियो हेर्नुस्)